L Lyophilized Silk Fibroin - Shiinaha Simatech
Alaabta Tani waxay ku hayn karaa deggan in ka badan 18 bilood heerkulka qolka. The xal Xariir cusboonaadeen weli awood isku mid ah dhismaha ah guurka ka dhismeedka andα-galool gariiradda random in β-sheet dhismeedka sidii xal Xariir asalka ah.
Magaca Kale: Xayiraadda-qalajiyey fibroin Xariir
Large fibroin miisaanka Xariir kelli in xal aqueous loo hawl gelin kala duwan wax adag qaabab karo. Nasiib darro, xalka xariir la Daahiriyey oo aan lagu kaydin karaa ama gaadiid muddo dheer sida Xariir Oo Qaliin isbadal leh qaabka iyo isku celceliyo ay sabab u tahay xasilooni thermodynamic. Our lahaansho saarka Xariir lyophilized si buuxda u xaliyaan dhibaatooyinkan iyo xariir ah lyophilized waxaa la kala diri karaa biyo ama xafidi at-fiirsashada sare, fududeynta geysto processing wax.
Xariir Lyophilized in weelka galaas soo bandhigaysaa in ay noqon a geed isbonji la iska furan oo cad. Tan iyo weelka waxaa gebi ahaanba laga shaabadeeyey, Xariir lyophilized sii joogi kartaa deggan muddo dheer (> 18 bilood) heerkulka qolka marka la eego muuqaalka, milmi, miisaanka qaybinta kelli iyo qaab-dhismeedka. The xal Xariir cusboonaadeen weli awood isku mid ah dhismaha ah guurka ka gariiradda random iyo α -dhismeedka -helix in β -sheet dhismeedka sidii xal Xariir asalka ah, taas oo muhiim u ah diyaarinta ah ee wax adag qaabab.
Shaxda 1 dhimaya, baaritaanka iyo habka of fibroin Xariir lyophilized
Dhimaya, Imtixaanka iyo Habka Lyophilized Silk Fibroin
Form wakiilada Lyophilized
Xidhmada 20 Dhalooyinka ML penicillin
Habka of kaydinta Kaydiyaa qalalan, meel hawo heerkulka qolka
fiirsashada xal ka dib markii rehydration ≤ 40%
O habka peration:
fibroin Xariir Lyophilized lagu kaydin karaa heer kulka qolka oo muddo 18 bilood ah. Ka hor inta isticmaalka, biyo ama xafidi ama xal cell / daroogada lagu dari karaa dhalada galaas oo Nadiif ah oo isticmaalaya sirinj irbad (sii shaabadeeyey) ama mikaraskoob (dhalada furan). The cake Xariir lyophilized dhalada si dhakhso ah loo rehydrated kartaa sameynta xal huruud ah iftiin iyo uruureen Xariir helay gaari kartaa ilaa 30-40% ku.
La mid ah sida xalka saabsanaa isdaahirinta, ka dib, fibroin Xariir lyophilized ku milma sidoo kale loo isticmaali karaa sida qalab aasaasi ah sida xawliga ah u abuurtay alaabta badan Biomedical. Intaas waxaa sii dheer, L fibroin Xariir lyophilized waxay leedahay faa'iidooyin of dheer iyo kaydinta daarmayaay'e, gaadiidka fudud iyo ka-fiirsashada sare ee xal cusboonaadeen is barbar in ay xal fibroin xariir joogto ah.
Previous: In situ Samaynta Qalabka Silk Fibroin Saliid
Next: Silk Fibroin Dahaarka
L Lyophilized Silk Fibroin Powder
L Lyophilized Silk Fibroin Protein
L Lyophilized Silk Fibroin Protein Powder
L. Lyophilized Silk Protein
L Lyophilized Silk Protein Powder